Ọrụ Nhazi Weebụsaịtị
MID-MAN – ụlọ ọrụ webụsaịtị nhazi ụkpụrụ UX/UI chọrọ chọrọ.
Ịmepụta weebụsaịtị dị mma na Mid-Man Agency. Ịmepụta na ịmepụta saịtị ndị na-eweta uru na ịdị irè bụ ebumnuche ndị otu Mid-Man zubere maka gị. Mid-Man ga-enyere gị aka dozie nsogbu nke ịbịaru ndị ahịa site na ọrụ ahụ, webụsaịtị webụsaịtị, CREATIVE - OPTIMIZATION - SEO STANDARD - Ọkachamara na IHE.
Ị na-abanye n'ụdị a ma ọ bụ na-agba mbọ ka ị na-efunahụ gị?
N'ime oge nke teknụzụ dijitalụ 4.0, yana mmepe ngwa ngwa nke ịntanetị, omume nke azụmahịa n'ịntanetị ma ọ bụ ịre ahịa n'ịntanetị ewetala arụmọrụ akụ na ụba na ọtụtụ ahịrị azụmaahịa n'ụwa niile. Kedu maka gị? Ị na-emepụta weebụsaịtị wee sonye n'ahịa azụmahịa ịntanetị?
Dị ka akụkọ 2019 Southeast Asia e-azụmahịa sitere na Google, Temasek, na Brain & Company, nkezi uto maka oge niile 2015-2025 nke e-azụmahịa bụ 29%. Site na ụdị uto ngwa ngwa dị otú ahụ, ohere maka gị isonye na ahịa azụmaahịa n'ịntanetị mepere emepe.
Dị ka e-commerce Association (VECOM) si kwuo, dị ka nke 2019, ihe dị ka 42% nke azụmahịa nwere webụsaịtị, nke ihe ruru 37% natara iwu site na webụsaịtị. Ọbụghị naanị ndị ahịa na-ere ahịa, ndị ahịa bụ ndị azụmaahịa na-enye iwu site na akaụntụ weebụsaịtị maka ọnụego ruru 44%. Nke a na-egosi na ndị ọrụ ji nwayọọ nwayọọ na-atụgharị azụ ahịa na webụsaịtị kama ịzụrụ ngwaahịa ọdịnala.
Dabere na mgbanwe omume ịzụrụ ihe n'oge COVID, azụmahịa ndị nwere weebụsaịtị nwere uru ugbu a n'ịsọ asọmpi n'ahịa ịntanetị. Ị nwere ike ịma jijiji maka ịsọ mpi gị na ndị na-ebu ụzọ, mana ọ dịkwa mma. N'ihi na dabere na ihe ndị asọmpi gị mere, nke a bụ ohere maka ịmụta, ahụmahụ, ịmepụta na ịmepụta maka weebụsaịtị gị.
Dabere na data, dị ka nke 2019, ihe ruru 55% nke azụmaahịa nwere nrụpụta kwụsiri ike, yana 26% na-ewere webụsaịtị dị ka ngwa na-enye aka maka ire ngwaahịa. Ya mere, ihe mbụ na ihe dị mkpa ugbu a bụ ịmepụta weebụsaịtị naanị maka gị. Mid-Man ga-eso gị, mepụta ọkachamara webụsaịtị, ma nyere aka ịkwalite ọrụ azụmahịa gị na ịkwalite.
MID-MAN na-enwe obi ụtọ ịbụ onye ọkachamara webụsaịtị nwere ahụmahụ nke ọtụtụ ọzụzụ na ahịa ahịa. Anyị ga-eso ma kwado gị n'ichepụta ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa dị irè, ịdị mma, PRESTIGE na ọkachamara. Afọ ojuju gị bụ ọrụ nke otu egwuregwu webụ niile na MID-MAN.
Ebe a na-ere ahịa bụ ogige agha. Webụsaịtị ahụ bụ ntọala, ngwa agha, yana ebe maka ozi gị. Ọ bụrụ na ị nwebeghị ntọala webụsaịtị dị mma, malite iwulite ya taa. N'oge a nke mgbanwe dijitalụ siri ike, inwe ebe nrụọrụ weebụ ezughị. Inwe webụsaịtị na, iji ya rụọ ọrụ nke ọma, na-enyere aka melite ego ha nwetara bụ ebumnuche ịchọrọ ịchụ. E wezụga imewe webụsaịtị mara mma, ịkwesịrị ịṅa ntị na ahụmịhe onye ọrụ. N'ihi na imewe weebụ na usoro ịzụrụ dị mfe ma dị mma na ihe ọmụma dị mkpa maka gị na ndị ahịa "mechie iwu" n'ụzọ dị mfe, MID-MAN AGENCY nwere usoro gburugburu ebe obibi nke ngụkọta ahịa ahịa ga-abụ akwa mmiri iji nyere gị aka ịbịaru ndị ahịa gị lekwasịrị anya nso. n'ahịa ịntanetị.
Site n'ike nke imewe webụ, ọkọlọtọ ọkọlọtọ, na ahụmịhe onye ọrụ, MID-MAN nwere mpako ịbụ onye na-eduzi ngalaba nhazi weebụsaịtị QUALITY AND PRESTIGE.
GỊNỊ mere ị ga-eji chepụta weebụsaịtị?
Weebụsaịtị bụ ọwa nkwukọrịta yana ngwa azụmaahịa na-eduga taa. Weebụsaịtị dị ka ihu na-anọchite anya gị, azụmahịa gị, ma ọ bụ nzukọ gị n'elu ikpo okwu teknụzụ dijitalụ 4.0 IOT.
N'ụzọ dị ịrịba ama, n'oge ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ọrịa Covid-19, akụ na ụba ụwa niile emetụtara nke ukwuu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ metụtara kpọmkwem, dị ka mbubata-mbupu, njem nlegharị anya, wdg, mana ego sitere na ịzụ ahịa n'ịntanetị site na webụsaịtị. Ọtụtụ webụsaịtị azụmaahịa na ibe e-azụmahịa B2C ka na-abawanye site na 20-30%, ọbụlagodi na-eji ihe ndị dị mkpa na akụrụngwa ọgwụ na-abawanye nke ọma. Nke a na-egosi na mgbanwe omume ịzụ ahịa nke ndị ọrụ ji nke nta nke nta na-aga n'ahịa ịntanetị.
Site na mgbanwe dijitalụ na ọrụ dị oke egwu nke weebụsaịtị taa, ọ nweghị ihe mere ị ga-eji laa azụ ịmepụta weebụsaịtị ma kwalite akara gị na ahịa ịntanetị.
Weebụsaịtị ọkọlọtọ SEO
Ọkachamara nhazi webụ ọkachamara SEO na-eme ka ọ dịrị gị mfe ibuli ma tinye ngwaahịa na ọrụ azụmahịa gị na nchọ TOP na Google. Na MID-MAN, emebere webụsaịtị ahụ na ụkpụrụ SEO ozugbo site n'oge arụ ọrụ webụsaịtị, emebere ya site na koodu isi mmalite gaa na njirimara, OnPage na OffPage, imewe na-anabata ya, echekwara ya na usoro SSL enyi na-achọ search engine. ..
Ntọala Nhazi Webụsaịtị n'ụlọ ọrụ etiti mmadụ
N'adịghị ka ngalaba nhazi webụsaịtị ndị ọzọ n'ahịa taa, MID-MAN anọghị n'otu asụsụ ma ọ bụ ikpo okwu imewe. Ndị otu injinia MID-MAN nwere ikike ikpo okwu iji chepụta WordPress, Laravel, React, React Native, Node JS… ga-emezu ihe niile chọrọ njiri mara webụsaịtị gị.
GỊNỊ mere otu nwoke ji ahọrọ ụkpụrụ webụsaịtị ọtụtụ-platform?
Nhazi Webụsaịtị ọtụtụ ozi
Nhazi webụsaịtị dị n'ime
A na-ewere ngwá ụlọ dị ka ụlọ ọrụ nka etinyere n'ọrụ. Ya mere, ebe nrụọrụ weebụ imewe kwesịrị izute ihe ịchọ mma, mara mma, ma gosipụta ụdị ika nke azụmahịa gị. Inwe webụsaịtị dị n'ime na-enyere azụmahịa gị aka ibuli akara gị wee rute na nnukwu faịlụ nke ndị ahịa nwere ike ịre n'ahịa ịntanetị.
Site n'echiche ruo na mmejuputa iwu
Nzọụkwụ iji Mepụta weebụsaịtị Ọkachamara n'etiti mmadụ
MID-MAN, nke nwere ebumnuche nke ọrụ ndị ahịa na-eche, na-achọ mgbe niile na ngwọta nkwado ndị ahịa na mmemme imewe weebụ. Anyị nwere usoro ọrụ kwụ ọtọ iji jeere gị ozi nke ọma.
Ntụpụ ụkwụ 1
Ịghọta ndị ahịa
Ndị ọrụ MID-MAN nwere ahụmahụ na-ezute ndị ahịa, gee ntị n'echiche imewe, ma kparịta atụmatụ ndị ịchọrọ na imewe weebụ. Mgbe ndụmọdụ ngwọta na atụmatụ adabara gị nzube na mkpa, anyị na-eme atụmatụ imewe.
Ntụpụ ụkwụ 2
Ịbanye na imekọ ihe ọnụ
Iji hụ na ikike gị, anyị jikọrọ aka mee akwụkwọ iwu. Obere aka na-egosi nnukwu mmụọ. MID-MAN ga-abụ enyi gị, na-enyere gị aka iwulite usoro nhazi webụsaịtị kwesịrị ekwesị ma bulie ika gị n'ahịa.
Ntụpụ ụkwụ 3
Dabere na echiche gị, ndị otu imewe webụsaịtị MID-MAN nwere echiche okike na nke na-anabata ihe ga-emepụta ọmarịcha webụsaịtị ngosi UI/UX-ọkọlọtọ. Mgbe ị tụlechara ngosi ahụ, ndị otu imewe ga-emezigharị gị ka ịmechaa nhazi zuru ezu.
Ntụpụ ụkwụ 4
Site n'ichepụta anyị nwere na ahụmahụ a na-akwakọba n'ime ọtụtụ afọ nke na-arụ ọrụ, otu ndị mmemme ga-eme atụmatụ mmemme ọkọlọtọ UX (ahụmahụ onye ọrụ) ma mejuputa mmemme weebụ iji hụ na njirimara zuru ezu bara uru ma dị mma maka ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ntụpụ ụkwụ 5
Nwalee ma dezie
N'oge a, imewe webụsaịtị gị fọrọ nke nta ka ọ zuo oke. Agbanyeghị, iji mepụta ngwaahịa kachasị mma ma hụ na weebụsaịtị na-arụ ọrụ nke ọma na nke ọma, ndị otu teknụzụ MID-MAN ga-elele ma hazie tupu etinye ya n'ọrụ.
Ntụpụ ụkwụ 6
Ntinye aka zuru oke
Ntinye aka zuru oke bụ ọrụ dịịrị ndị otu MID-MAN niile. Ndị otu MID-MAN ga-eduzi gị site na ndị nchịkwa webụ raara onwe ya nye ma nwee echiche. N'agbanyeghị na arụchara ọrụ a, ndị otu MID-MAN dị njikere mgbe niile ịkwado gị n'ịrụ ọrụ na ijikwa weebụsaịtị.
GỊNỊ mere ị ga-eji họrọ ọrụ nhazi webụsaịtị achọrọ n'etiti mmadụ?
MID-MAN AGENCY nwere otu ndị ọrụ nwere ahụmahụ n'ichepụta webụsaịtị ọtụtụ ụlọ ọrụ. Site na asụsụ imewe dị iche iche, anyị na-emezu ihe niile ị chọrọ. Kpọtụrụ anyị ka ị nweta nhazi weebụsaịtị ọkachamara ma dị irè.
Nhazi webụsaịtị bụ isi
Weebụsaịtị iji webata ndị mmadụ n'otu n'otu, ụlọ ahịa na azụmaahịa na ọkara na obere
Weebụsaịtị ahịa izugbe
Nrụpụta interface pụrụiche na-arịọ: 1 interface ibe
Ndozi akpụkpọ ahụ efu: ruo ugboro atọ
Mmemme na-arụ ọrụ bụ isi na-achọ
Mmetụta weebụsaịtị: Basic
Platform Mmemme: Nhọrọ
Ọkọlọtọ UI/UX Nhazi – Ọhụụ onye ọrụ na ahụmịhe onye ọrụ
Standard Responsive – dakọtara na ọtụtụ ihe nchọgharị na ngwaọrụ dị ka PC, laptọọpụ, mbadamba, na mobile.
Na-ebuli ọsọ nbudata ibe
Standard SEO mmemme
Nchekwa SSL efu maka afọ mbụ
Nyefee koodu isi mmalite (koodu isi mmalite)
Akwụkwọ ikike na mmezi oge ndụ
Nkwado teknụzụ 24 / 7
ZỤTA UGBU A
Nhazi webụsaịtị dị elu
Weebụsaịtị iji webata ụlọ ahịa, nnukwu azụmaahịa
Weebụsaịtị maka azụmahịa n'ịntanetị, akụkọ, ọrụ, ego, teknụzụ pụrụ iche, eserese dị elu…
Nhazi interface pụrụ iche na-achọ: ọnụ ọgụgụ skins na-akparaghị ókè
tweaks akpụkpọ efu: Ruo ugboro ise
Mmemme arụmọrụ dị elu na-achọ
Mmetụta webụsaịtị: Ọ dị elu
Njikọ ọtụtụ ọwa agbakwunyere na ndị ọzọ
Ndụmọdụ Ngwọta Ịre ahịa Comprehensive efu
Mbelata na ụgwọ ọrụ ahịa
Standard Responsive – dakọtara na ọtụtụ ihe nchọgharị na ngwaọrụ dị ka PC, laptọọpụ, mbadamba, mobile, na-akpụ akpụ,…
GỊNỊ mere imewewebụsaịtị dị na MIKO TECH ji enwe ọtụtụ ọnụ ahịa?
Imewe webụsaịtị kachasị dị ka isi njirisi na-elekwasị anya na ndị ahịa gị bụ ebumnuche MID-MAN na-achọ. Anyị ghọtara na na ụlọ ọrụ ọ bụla nke nha ọ bụla, ọ dị mkpa maka ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ọkachamara na nke dị irè. Ya mere, ọrụ imewe webụ anyị na-eju ndị ahịa niile afọ na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
ỊZA AJỤJỤ NDỊ NA-EME EBE WEBISATE NA MID-MAN
Ị na-ajụ - MID-MAN Azịza
Achọrọ ịmụtakwu maka ọrụ imewe webụsaịtị MID-MAN? Lelee azịza n'okpuru!
Kedu ihe ị ghọtara site na imepụta weebụsaịtị?
Nhazi webụ ma ọ bụ webụsaịtị bụ naanị ọrụ nke ịmepụta weebụsaịtị maka mmadụ, ụlọ ọrụ, azụmahịa, ma ọ bụ nzukọ. Enwere ụzọ abụọ bụ isi maka imewe Weebụ: imewe webụ kwụ ọtọ na imewe webụ dị ike. Maka nkọwa ndị ọzọ, lee isiokwu Gịnị bụ imewe webụsaịtị?
Gịnị bụ SEO ọkọlọtọ webụ imewe?
Standard SEO webụ imewe bụ webụsaịtị nwere nhazi yana njiri mara nke na-enye igwe nchọta ọchụchọ dị ka Google, Yahoo, na Bing… ka ịrara wee ghọta webụsaịtị niile n'ụzọ dị mfe. Hụ nkọwa zuru ezu nke ihe karịrị okwu 3000 gbasara nhazi weebụsaịtị ọkọlọtọ SEO
Kedu ihe bụ imewe weebụ na-anabata?
Nhazi webụ na-anabata bụ naanị ụzọ isi guzobe ma wuo webụsaịtị dakọtara wee gosipụta ha na ụdị ngwaọrụ eletrọnịkị niile, dị ka ekwentị, mbadamba, laptọọpụ, PC, wdg ... na mkpebi ọ bụla, etiti weebụ ọ bụla.
Ego ole ka imewe webụsaịtị a na-eri?
Dabere na ihe achọrọ na njirimara nke weebụsaịtị ọ bụla, ngalaba imewe na-enye ụgwọ nhazi weebụsaịtị dị iche iche.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji wuchaa imewe webụsaịtị?
Oge iji wuchaa ebe nrụọrụ weebụ ga-adabere n'ọtụtụ ihe dịka mpaghara ebe nrụọrụ weebụ na-achọ, ndị ahịa; mgbanwe okirikiri nhọrọ ukwuu na ndị mmekọ, dị mfe ma ọ bụ mgbagwoju interface; arụmọrụ webụsaịtị, yana atụmatụ ndị ọzọ. Oge iji chepụta webụsaịtị na MID-MAN na-abụkarị izu 3-4, dịka mgbanwe ya na ndị mmekọ siri dị.
Onye nrụpụta weebụsaịtị nwere nkwekọrịta doro anya?
MID-MAN na-agba mbọ ịnwe nkwekọrịta niile iji chebe ọdịmma ndị mmekọ, na-ahụ na ịkwụwa aka ọtọ, nghọta na ntụkwasị obi mgbe ha na-arụkọ ọrụ.
Na ahụmahụ niile, nraranye na ọkachamara, Mid-Man ji obi ike na-enye ndị ahịa ihe ngwọta kachasị mma iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ ọkachamara deisgn.
Ị TNHH TIẾP THỊ VÀ DỊCH VỤ MID-MAN
Ngay Cấp: 05/03/2021 do Sở Kế Hoạch na Đầu Tư TP Hà Nội
Hotline 1: +84 90 3401508
Hotline 2: +1 (484) 414-5687
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Weebụ Trang: https://mid-man.com/
ịkwụ ụgwọ ụzọ
Usoro nke Ọrụ
© 2021 Mid-Man - Ngwọta Weebụsaịtị tụkwasịrị ntụkwasị obi maka azụmaahịa ọnlaịnụ
Ndepụta mkparịta ụka
Biko họrọ nkata ka ịmalite izi ozi.